FANADIHADINA AO RAHA	Miverena Famokarana horonantsary – Fantaro ny misterin’ny fifanarahana tamin’ireo trano nilalaovana ny tantara EFA MIEZAKA MANATSARA NY FOMBA FILALAOVANA HORONANTSARY IREO MPAMOKATRA ETO MADAGASIKARA. MITADY IZAY TENA MIFANARAKA AMIN’NY FILAN’NY TANTARA IZY IREO. MANDEHANDEHA BE ARY MIOVA TOERANA MATETIKA MBA HAMPIAINANA NY TANTARA. MITANTARA NY FEPETRA AMIN’IRENY TOERANA NA TRANO FANATONTOSANA HORONANTSARY IRENY IREO TOMPON-TRANO.
Amin’ny ankapobeny, ny tantara no mamaritra sy mitondra ny toerana hanaovana ny horonantsary iray. Na izany aza, ny 60%-n’ny sary avoakan’ny sarimihetsika no avy amin’ny toerana fa ny fandravahana na fanaingoana ny toerana kosa no mamaritra ny 40% ambiny.
Anisan’ny mandany andro ny mpanatontosa amin’ny ankapobeny ny fisafidianana ny toerana iray hanaovana ny fandraisana ny sary. «Arakaraka ny endriky ny toerana ilain’ny horonantsary ny faharetan’ny fijerena ireo toerana ireo», hoy ny fanazavan-dRazafindrakoto Gérard, avy amin’ny Trano mpamokatra Horizon.
Ho an’ny horonantsary «Tondra-dra», izay havoakan’izy ireo amin’ny volana marsa ho avy izao, dia nandany tapa-bolana izy ireo tamin’ny fitiliana ireo toerana telo hanaovana ny fandraisanana ny sary izay tany Antsirabe, Nosy-Be ary Andasibe.
Mifandraika amin’izay ihany koa ny fandaniany, izay manodidina ny 10%n’ny tetibola hoentina hanatontosana ny horonantsary. Tsy maintsy miatrika ireo fijerena ny toerana ireo ny mpanatontosa ny sarimihetsika sy ny mpanampy azy ary ny lehiben’ireo mpaka sary.
Rehefa hita ny toerana dia mitohy amin’ny fifanarahana sy fangatahana alalana (raha toerana hifaneraseran’ny daholobe no ampiaisana) no asan’ny mpanatontosa sy ny mpamokatra. «Matetika dia resaka fifanarahana sy fiaraha-miasa eo amin’ny tompon’ny toerana sy ny mpamokatra no misy. Na misy resa-bola aza mety ampahany ihany», hoy ihany izy. «Misy ireo mampanofa ny toerana toy ireo valan-javaboahary izay misy sarany efa voafaritry ny mpitantana», hoy kosa Razafimandimby Mamitiana avy amin’ny Scoop Digital. «Matetika dia misy ny fananganana na fanamboarana atao amin’ireny toerana ireny izay matetika ajanona sy atolotra ho an’ireo toerana mandray anay», hoy ihany izy. Ohatra nomeny tamin’izany ny trano falafa natsangan’izy ireo tany Andasibe nandritra ny fandraisana sary ny «Malok’ila 13».
Isan’ireo tanàna matetika ilalaovana sarimihetsika ny ao amin-dRafaramalala Robertine, etsy Madera Namontana. Eo an-kavanan’ny toeram-pitsaboan’i Namontana no misy azy io. Tanàna mirefy 3 000 m², kanto sady mahafinaritra ary mamaly ny filàn’ireo mpamokatra sarimihetsika mihitsy ity tanànan-dry Rafaramalala Robertine ity, raha raisina amin’ny isan’ireo sarimihetsika efa nolalaovina tao aminy. «Ampahana sarimihetsika fito no efa nolalaovina tato aminay», hoy izy.
Voalohany tamin’ireo horonantsary nahodina tao aminy ilay mitondra ny lohateny hoe: «Piraty» iarahana amin’ny Francis Turbo. «Narary i Francis Turbo tamin’izay. Nisy nanisy ranon-tsakay anefa ilay fanafody fanitrika tokony natao taminy. Hanesorany ny fanaintainana tamin’ny fitombenany dia nitsambikina tao anaty dobo teo an-tokontany izy. Io dobo eto an-tokontaninay io no nampiasaina tamin’izany», hoy izy no sady nihomehy.
Nisy ampahany tamin’ireo horonantsary «Malok’ila» ihany koa nahodina tao amin’ny tanànan’izy ireo. «Niasa avokoa na ny efitrano fandraisam-bahiny, na ny efitrano fihinanana na ny efitrano fikarakarana sakafo. Hatramin’io «Malok’ila 13 mai» io dia nisy ampahany nahodina tato aminay. Iray andro maninjitra izy ireo nanodina ny ampahan’iny Malok’ila farany iny tato an-trano», hoy hatrany Rafaramalala Robertine.
Tsy mitaky vola ho sandan’ny fakana horonantsary ao aminy anefa izy ireo na izany aza. «Manome izay fahafaham-pony ny mpamokatra sarimihetsika. Misy fianakaviana ihany koa miasa ao amin’ilay trano famokarana ka raisina ho toy ny fanampiana ho azy ireo izany», hoy izy.
Nahazoana fanaka vaovao
Raha vao migadona na hiditra ao amin’ity trano iray manaraka ity ianao, dia toy ireny miaina ny horonantsary «Malok’ila» ireny mihitsy, ho an’ireo efa nijery izany. Tsy aiza io fa ao amin-dry Rasoanirina Pierrette. Anisan’ireo fianakaviana nampindrana trano, nandraisana ny sary tamin’iny horonantsary iny. Monina eny amin’ny fokontany Talata, kaominina Ampanefy, eny Soavina Atsimondrano eny. Mpamboly sy mpiompy no asa fiveloman’izy mianakavy.
Nampiasaina ny tranony, natao trano nonenan-dRajao niaraka tamin’ireo vady aman-janany, ao anatin’io horonantsary io. «Vola kely 20 000 Ariary no nampanofana ny trano, isaky ny maka sary amina horonantsary iray, tany am-boalohany. Ar 100 000 kosa no aloan’ny mpamokatra io horonan-tsary io ankehitriny. Ny fanaka anay ato an-trano hatrany no ampiasain’izy ireo, rehefa maka ny sary. Tapaka nandritra ny fakana sary ilay «Malok’Ila 7» ny tongotry ny seza fandraisam-bahiny. Nosoloin’izy ireo fanaka vaovao ireo», hoy ity renim-pianakaviana ity, sady faly nampiseho ireo fanaka vaovao azony ireo. Nampiany fa nahazo loko nandokoana trano avy amin’ity orinasa mpamokatra horonantsary ity ihany koa izy ireo.
«Feno olona ny tanàna, rehefa maka sary ety ry Rajao. Tsy mianatra mihitsy ny mpianatry ny CEG. Mivezivezy eo mandritra ny iray volana eo izy ireo, mandritra ny fakana sary horonantsary iray. Misy ny mijanona hatramin’ny 10 ora alina. Saika mponina ety avokoa no milalao amin’ireny horonantsary ireny, rehefa misy ny ilàna olona marobe, toy ny hita tamin’ilay fety nokarakarain-dry Fetra, zanaky Rajao, ho an’ireo mpanaraka ny tantara. Tsy ataonay miafiafy ihany koa izy ireo. Faly izahay nefa matahotra amin’ny fandriampahalemana, tao aorian’ny nampalaza ny tranonay, noho iny horonan-tsary iny», hoy kosa Rakotondrasoa Edmond, tompon’ny trano mifanila amin’ny an-dry Rasoanirina Pierrette. Nampiasaina, natao tranon-dRaMersedesy ihany koa mantsy ny tao aminy, mbola ao anatin’ny tantara «Malok’Ila» hatrany.
Fahafantarana olona matetika no hahazoana trano na toerana ahafahana manao horonantsary. Horonantsary iray « Baraingo 1 sy 2″ notontosaina tao amin’ny tranona minisitra teto amintsika. Ity horonantsary ity izay nahitana an’i Marion sy Y-Zit.
« Nisy mpanakanto maro nandray anjara tamin’ny tantara. Fahafinaretan’io minisitra io ny nanome maimaim-poana izay tafiditra ao anatin’ny kanto rahateo. Tsy nisy ny sarany naloa saingy izahay kosa no nisahana ny fanadiovana avy eo », hoy Tovomanana Raharisoa, avy amin’ny Maki Production. Eny Ambohibao eny no misy io trano io ary nampiasaina tamin’ny horonantsary avokoa na ny trano na ny zaridaina lehibe.
Isan’ny trano nanatontosana io horonantsary « Baraingo 1sy 2″ io ihany koa ny trano lehibe iray eny Ankadikely Ilafy. « Mahafinaritra hoe tranon’ny tena no mba voafidy hanaovana izany horonantsary izany. Tsy mametra ny sarany izahay satria namana ihany koa ny mpamokatra. Ny hofana herinaratra sy ny fisahanana ny fanadiovana sy ny fandaminana kosa no fepetra apetraka », hoy Andrianiaina Elias, tompon-trano. Nilaza ity farany fa nisy akony lehibe teo anivon’ny fiaraha-monina sy ny fianakaviana ny nahitana ny trano tao anatin’ny horonantsary.
« Mahafinaritra fa mba miara-malaza amin’ny mpilalao sarimihetsika. Ny fianakaviana niantso avokoa raha vao nivoaka ilay horonantsary ary ny manodidina ihany koa faly satria nisy tamin’izy ireo no nandray anjara nanaingo izany horonantsary izany », hoy hatrany Andrianiaina Elias. Trano nipetrahan’i Gégé Rasamoely sy Razoary ary ry Marion ity trano ity tao anatin’ny horonantsary.
Miezaka mitady ny toerana sy ny zavatra rehetra mifanaraka hatrany amin’ny tantara ny mpamokatra. Isan’ny trano bongo kely iray nanaovana ny horonantsary « Hatraiza Andriamanitra? » ihany koa ny trano iray eny Ankadikely Ilafy ihany. Trano natao ho an’ny fianakaviana sahirana mihitsy io trano io ao anatin’ilay horonantsary. « Izay nomeny fotsiny no noraisinay fa tsy nametra. Faly izahay satria lasa nalaza ilay trano bongo kely. Ny olona no mitantara sy milaza fa izahay mbola tsy nahita ilay horonantsary », hoy hatrany Raharisoa Jeanine, tompon-trano.
Ny trano ivelany ihany no nalaina sary, raha ny filazan’ny mpamokatra, fa ny tao anatiny kosa trano hafa mihitsy no namboarina ho tranona sahirana tamin’ny alalan’ny afo kitay, fandriana jiafotsy efa rotika, …
Fonja, fiangonana …
Mitety toerana maro ankoatra ny trano ireo mpilalao sarimihetsika. Isan’ireny ny toerana ankalamanjana, izay maimaim-poana saingy tsy maintsy ahazoana alalana any amin’ny Tia Sary (sampana miandraikitra ny tontolon’ny sarimihetsika eto Madagasikara). Eo ihany koa ny fiangonana izay hakana alalana amin’ny mpitandrina. Toa izany ihany koa ny fonja, izay ahafahana manatontosa horonatsary rehefa mahazo alalana amin’ny talen’ny fonja. Tsy misy sarany avokoa ireo saingy misy ihany ny fepetra vitsivitsy tsy maintsy tandrovana. Kendrena izay tsy ahazoana ny sarin’ireo voafonja ary tsy mahazo mamantsika na manimba fitaovana kosa ny any am-piangonana. Ireo olona voasokajy ho mpilalao mpanampy (figurants) voaray eny amin’ireny toerana ireny mateika no sandaina Ar 5 000 ka hatramin’ny Ar 10 000.
Sary: Hery Rakotondrazaka, Claude Rakotobe, Lilia Rajaonah
Soratra: Faly Ran, Hanitry Ny Aina, Monica Rasoloarison, Lilia Rajaonah
Lalam-piainana – Zanaka tambanivohitra nioitra i Atallah Béatrice Vehivavy tso-piaina, tia manasoa olona ary tia mandray andraikitra eo amin’ny fianam-pianakaviana i Atallah Béatrice, filohan’ny Vvaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin’ny tetezamita (Cenit). Zanaka mpivarotra ary nipetraka tany ambanivohitra fa nihoitra tamin’ny fiainana izy, araka ny fitantarany.
«Olona tia fihavanana aho, mandefitra ary tsy tia manaratsy olona. Isan’ny tena zava-dehibe amiko ny mijery sy manampy ny fianakaviako», araka ny nomarihany. Vehivavy mahay mihaino ny manodidina azy ary mametraka ho ambony ny lanjan’ny fifankatiavana eo amin’ny fianakaviana ary indrindra ny mpiray tampo ihany koa ny Filohan’ny Cenit.
«Hatramin’ny mbola kely aho no efa tia manampy ny fianakaviako. Rehefa fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra dia tsy milalao aho fa manampy ny raiko mivarotra», hoy izy.
Vavimatoan’ny fianakaviana rahateo ny tenany izay isan’ireo akaiky ny rainy indrindra amin’ireo iray tampo aminy. «Izy no nampianatra sy nitaiza ahy hiatrika ny fiainana sy ho tia ny manodidina ahy. Maro ireo zavatra nolazainy no noentiko nihoitra tamin’ny fiainana. Talohan’ny nikipin’ny masony dia nanafatrafatra ahy ny hiahy ireo iraitampo amiko ny raiko ary notazomiko sy notanterahako izany hafatra izany», hoy i Béatrice Atallah.
Ho fanatanterahany ny tenin’ny rainy izay dia izy no mitaiza sady mpiantoka ny zanaky ny anadahiny mirahalahy ankehitriny.
«Isan’ireo tena akaiky ahy io anadahiko izay efa nodimandry io ary tsy misaraka amiko aty anaty poketrako aty mihitsy ny sariny. Rehefa misy ny adin-tsaina dia fanaoko no midina kely any ambanivohitray ary mitsidika ny fasana misy ny raiko sy ny anadahiko. Izay no mba isan’ny mampilamina ny saiko», hoy izy.
Taizan-dry masera Tsy avy ao Antalaha tsy akory i Atallah Béatrice, araka ny voalazany fa fanontaniana mipetraka aminy matetika, fa avy ao Ankaramena, tanàna kely 30 kilometatra miala an’i Taolagnaro. Tao amin’ny sekolin-dry masera tany an-toerana izy no namita ny fianarana ambaratonga voalohany. Tao amin’ny Lycée an’Ambositra indray no afaka bakalorea izay vao nisafidy ny hianatra ny lalam-piofanana lalàna ka lasa mpitsara.
«Tena taizan-dry masera mihitsy ny tenako. Katolika rahateo ny raiko ary izy no nandrisika ahy hitia an’Andriamanitra. Tiako ho marihana fa efa karazana antso nataon’Andriamanitra tamiko no nahatonga ahy nanapa-kevitra hirotsaka an-tsehatra hitantana ny raharaham-pifidianana io», hoy ihany ny filohan’ny Cenit.
Tsy dia manam-potoana Manambady ary manan-janaka vavy iray i Béatrice Atallah. Araka ny nambarany dia tia manaja ny tokantranony tanteraka izy na eo amin’ny lafiny fitiavana na eo amin’ny lafiny fihavanana.
Notsindriany ihany anefa fa misy ihany ny lesoka eo amin’izay fianam-pianakaviany izay noho ny asa iandraiketany. «Tsy toy ny teo aloha intsony aloha fa somary misy banga ihany izany fianam-pianakaviana izany saingy tsy maintsy halamina araka izay mampety azy ny fandaharam-potoana. Olona tia miasa aho ary matetika no tsy matory raha tsy amin’ny iray na amin’ny roa maraina any ho any. Rehefa misy ny fotoana dia ny miara-miantsena amin’ny zanako sy ny vadiko no mba mahafinaritra ahy. Fantatr’izy ireo tsara rahateo fa sarotra ny adidy sy ny andraikitra miandry ahy eto amin’ny firenena ka manohana akaiky amin’izany izy ireo», araka ny fanamarihana nataon’ny filohan’ny Cenit ihany. Rehefa alahady no matetika miantso ireo mpiray tampo aminy miara-misakafo eny amin’ny trano fonenany ny tenany.
Masiaka be ronono Mahitsy fiteny, tsy tia olona mandainga na mangalatra ihany koa raha i Atallah Béatrice. Olona be fandeferana izy saingy masiaka sy sarotiny amin’ny zavatra izay hataony.
«Ny indro kely anefa raha misy olona mivadika amiko dia mihidy amin’io olona io mihitsy ny foko », araka ny nomarihany. Manana fomba fijery mandroso ity renim-pianakaviana ity ary tsy mihemotra amin’ny fanapaha-kevitra raisiny. «Ny lasa dia homba ny lasa fa ny ho avy foana no tokony hatrehana sy hatao izay mampety azy», hoy izy.
Vary amin’anana Ny mihinana vary amin’anana sy ny kitoza na saosisy no tena ankafiziny. Laoka tiany indrindra koa ny trondro endasina miaraka amin’ny ron-tsaramaso. Eo ihany koa anefa ny hen’omby sy ravintoto hampiarahana amin’ny voanio. Tia ireo karazana hena na hazandrano hatono ihany koa ny vehivavy ary ankafiziny ihany koa ny mihinana voankazo maro karazana isan’andro.
Isan’ny fialam-boly tian’ny filohan’ny Cenit ny manao fanatanjahantena. Efa nanao ny haiady «Karaté» ny tenany ary tia manao «basket» ihany koa. «Tamin’ny mbola tanora dia tiako koa ny manao «tennis», araka ny nomarihany.
Eo amin’ny lafiny mozika dia ireny mozika «classique» ireny no tena fihainony ao an-trano. Tia mikarakara zaridaina ihany koa i Atallah Béatrice saingy tsia dia manam-potoana firy amin’izany intsony noho ny asany.
Asa sosialy Efa nitana ny toeran’ny filohan’ny fitsarana momba ny zaza tsy ampy taona no sady mpitsara mpamoaka didy ary mpitsara mpanao famotorana teto Antananarivo ny filohan’ny Cenit. Mpitsara tao amin’ny fitsarana ambony izy izao lasa mpitantana ny raharaham-pifidianana izao. Ny taona 2002 ka hatramin’ny taona 2009 dia efa niasa tao anatin’ny filankevim-pirerenena misahana ny raharaham-pifidianana ny tenany. Efa nanara-maso ny fifidianana nitranga tamin’ireo Firenena maro taty Afrika sy tany Eoropa izy, araka izany.
Mpikambana ao anatina fikambanana mpanao asa sosialy maro ihany koa ny filohan’ny Cenit. Isan’izany ny Anaf, Fizafato, Inner Weel…
Nangonin’i Juliano Randrianja Fiainana mpanakanto – Miatrika irery ny mozika aloha i Ndondolah mandram-piverin’i Tahiry Ny tontolon’ny fanatanjahantena no noheverin’ny rehetra fa ahafantarana an-dRaharison Veloary Lala, fantatra amin’ny anarana mpanakanto Ndondolah, tany am-boalohany. Saika nahitana azy tamin’izany ny baolina kitra ary anisan’ireo kapitenin’ny ekipa tany an-tsekoly sy teo anivon’ny fokontany izy. Izy efa lasa mpanakanto io aza dia mpanafika tao anatin’ny ekipa mpanao baolina kitra itambaran’ny artista. «Ireo ray aman-dreny dia efa nihevitra tamin’izany fa any ny lalana hizorako ary «katalôgy» mihitsy aho miaraka amin’ny fanamian’ny mpanao baolina», hoy i Ndondolah.
Efa tao anatin’i Ndondolah ihany koa anefa ny famoronana. Teo amin’ny faha-13 taonany izy no namorona ny «Tojo namana» sy «Voronkely», ary efa nankafizin’ny fianakaviana efa nandre izany sahady ireo sanganasa ireo. «Efa talenta ilay izy fa ny nanetsika azy sisa no natao taty aoriana», araka ny filazan’ity mpanakanto ity azy.
Anisan’ny tian’i Ndondolah ny nitendry gitara, ka io no fitaovana entiny mamoron-kira hatramin’izao. Anisan’ny nahatonga azy hifantoka amin’ny hira ny fahitany an’i Tahiry, izay anabaviny ihany, manam-peo sy manana ny angovo entina amin’ny sehatry ny mozika. Ny taona 1995 no teraka ny tarika Ndondolah sy Tahiry. Nambabo ny fon’ny mpijery tamin’ilay hira voalohany «Kamboty fitia», izay niarahan’izy mianadahy nikalo. Nanomboka teo ry zareo no lasa mpiray tsikombakomba tamin’ny sehatry ny mozika, ka tsy hay nosarahina teo amin’ny tontolon’ny mozika intsony i Ndondolah sy Tahiry. Nitombo ny famoronana ary niakatra hatrany ny lazan’ny tarika.
Tsy rava Ndondolah sy Tahiry…
Ampolony isan-taona ny fampisehoana vitan’izy mianadahy miaraka amin’ireo mpitendry sy mpandihy, hatramin’ny taona 2010 niondranan’i Tahiry tany andafy. Ity tranga ity dia nampiteraka resa-be teo amin’ny tontolon’ny kanto teto Madagasikara, nampiely tsaho isan-karazany, tao anatin’ny roa taona izao.
Tsy rava anefa ny tarika na lasa aza i Tahiry. «Mbola eo i Tahiry fa mandra-piverenany dia miatrika irery ny mozika eto an-toerana i Ndondolah», hoy ity farany. Mbola any ivelany rahateo ary manana ny fototr’asany i Tahiry. «Tsy foana akory ny tarika Ndondolah sy Tahiry fa lalana nodiavin’ny zanak’olombelona ny fanambadiana sy ny fitadiavana, izay naniraka azy ho any ivelany», araka ny fanazavan’i Ndondolah ihany.
Nanamarika rahateo ity mpanakanto ity fa tsy misy velively ny eritreritra hanolo an’i Tahiry fa rehefa miverina na mandalo eto izy dia mitombina foana ilay tarika Ndondolah sy Tahiry. «Hisy mihitsy aza amin’ity taona ity ny fandalovan’i Tahiry eto an-tanindrazana ary tsy maintsy hisy ny seho hatao ao anatin’izany», hoy sahady i Ndondolah nampanantena.
Anisan’ny nahatsapan’i Ndondolah ny fankafizan’ny mpitia mozika an’i Tahiry ny fahabangana napetrany. Na izany aza, mbola mitohy hatrany ny famoronana ka na nandeha irery aza izy dia tafita tany amin’ireo mpankafy ny vazo vaovao, toy ny «Ambiansa be», «Efa izay mihitsy» ary ny «Ataoko mahita»…
Ankoatra ny maha mpanakanto azy, dia manana ny asa fivelomany amin’ny maha mpandraharaha azy i Ndondolah ary anisan’ny andraikiny ao anatin’izany ny fampifandanjana ny mozika sy ny asa. «Fototr’asa eo ihany fa ny mozika tsy azo ambaniana. Ezahina araka izay azo atao ny mampifandrindra azy roa fa raha tonga ny tsy azo anoharana dia tsy maintsy mandefitra kely ny mozika», hoy izy.
Hananika ny faha-38 taonany i Ndondolah amin’izao fotoana izao. Manambady aman-janaka izy ary araka ny famaritany dia dada masiaka be ronono izy. Na eo aza ny fahasahiranana samihafa dia miezaka ny manokana andro iray ao anatin’ny herinandro izy hiarahana amin’ny fianakaviany. Na io misakafo na mitsangatsangana. Anisan’ny sakafo tena ankafizin’ity mpanakanto ity ny sakafo rony, indrindra ny ron-tsaramaso. Fialam-boly ankamamiany kosa ny fijerena sarimihetsika «action» sy ny fijerena fampisehoana amin’ny fahitalavitra.
Raha masiaka be ronono izy amin’ireo zanany, hentitra be kosa ao anatin’ny fitantanana ny tarika. Be fitiavana ary diso matotra loatra aza indraindray. Na misy aza ny fifamaliana madinidinika, dia anisan’ny katsahin’i Ndondolah mandrakariva ny fitadiavana ny marimaritra iraisana.
Anisan’ny nanamarika ny fiainan’i Ndondolah teo amin’ny mozika ny fampisehoana nataony tany Toliara. «Nihevitra aho tamin’izany fa ireo mozika mihetsiketsika ihany no tena ho tian’ny mpijery, saingy tena nampihetsi-po ahy ny nahitako fa na ireo hira milamindamina aza dia niaraka nihira taminay hatramin’ny farany ireo mpijery», hoy ny fitantarany sy fitadidiany.
Hahafantarana an’i Ndondolah, ankoatra ny famoronana ho an’ny tarika, ny fanomezany hira ho an’ny mpanakanto hafa. Anisan’ireny ny hiran’i Melky sasany, izay tsy iza fa zanak’anabaviny ihany. Efa misy ihany koa amin’izao fotoana ny fifandraisana amin’ny mpanakanto iray efa manana ny lazany ka hiara-hiasa sy hihira ny sanganasan’i Ndondolah.
Amin’ny ankapobeny, miainga hatrany amin’ny fototry ny tantara ny famoronan’i Ndondolah hira ary ny feony no hita aloha aorian’izany. Rehefa vita izany vao miditra amin’ny fandrafetana ny tonon-kira izy. «Matetika amin’ny toerana mangina, rehefa matory ny olona no miroso amin’ny famoronana aho ary indraindray maharitra hatramin’ny 1 ora maraina», hoy ihany izy.
Iray amin’ireo hira voalazany fa mora noforonina indrindra ny «Confiance» ary tena tian’i Tahiry tokoa.
Soratra: Faly Randriamiarantsoa • Sary: Mamy Maël
Tadidinao ve akia Cherie
Ilay fety atsy ho atsy
Efa akaiky aky malala
efa amin’ny asabotsy
Efa fantatrao ry Lala
Izany no indrindra amin’ny fiainako
Ny mandihy amin’ny lamozika
Manodinkodina ny vatako
Ataoko mahita io Cheri
Ataoko mahita io raha tian-dry
Ataoko mahita io malala
Ataoko mahita io aza miala
Efa haiko tsara be
Fa ianao tia mandihy
Tia mandihy malemilemy
Ka mba moramora ihany
Na dia tianao aza izany
Izaho tsy hiatsaravelatsihy
Fa rehefa tiako ny ahy dia tiako
Ataoko amin’ny foko
Izay mahay avia aty
Fa atao mahamay ataoko milay
Fa mba moramora akia ndry
Fa maha sadaikatra sy mahamenatra
Fa ilay mozika tsy ho lany andihizantsika
Fa maka aina kely
Ianao tsy mety reraka
Faran’ny herinandro JAO’S PUB – AMBOHIPO
Hanafana ny faran’ny herinandro ry Jaojoby mianakavy
Hifandimby hanafana ny faran’ity herinandro ity eny amin’ny jao’s Pub eny Ambohipo ry Jaojoby mianakavy. Hisantatra izany anio alina i Andreson Jaojoby, zanak’ity mpanjakan’ny salegy ity. Ambiasa mafana no entiny amin’ny fitondra an-tsehatra ireo hirany amin’ny gadona salegy. Mety hanome endrika vaovao ireo salegin’i Jaojoby ihany koa anefa ny hiangalin’i Andreson ireo hirany ireo.
Hanohy ny seho kosa ny sabotsy 19 janoary alina ny Jao’s Band. Tarika izay niforona noho ny hetsika Madajazzcar, izay ahitana an’i Lucas Jaojoby (gitara solo) sy Jackson Jaojoby (gitara beso). Hiabahan-toerana amin’ny sehon’ny Jao’s Band, araka izany, ny mozika jazz izay laroin’ny gadon-kira hafa toy ny salegy, blues, reggae…Hitondra ny feo mangany amin’izany eo amin’ny sehatry ny hira i Charline Jaojoby.
«Malok’ila 13 mai» mbola hiarahana amin-dRajao sy Pasitera
Hisantaran’ny Scoop Digital ny fampisehoana sarimihetsika ataon’izy amin’ity taona ity ny «Malok’ila 13 mai», izay haseho voalohany eny amin’ny CCI Ivato, ny alahady 20 janoary izao, amin’ny 2 ora sy amin’ny 4 ora. Tsy mivaona amin’ny zava-misy tamin’ny andiany teo aloha ny votoatin’ny tantara, izay mbola hanjakan’ny resa-pitiavana, fianakaviana ary fihomehezana. Hampiavaka ity andiany faha-13 ity kosa anefa ny fironan’ny horonantsary nankany amin’ny endrika «Kômandô». Ankoatra an-dRajao sy Pasitera, dia mbola hita ao anatin’ny horonantsary hatrany ry Raly, Mariane, Bakoly… Tsy hita taratra intsony kosa anefa ry Randrenja sy Razoary.
Mandritra ny fampisehoana amin’ny alahady izao ihany koa no hanaovana ny fisarihana tamin’ny lalaon’ny «Malok’ila 12» ho an’ireo nividiky ny vokatra orizinaly.
Nisy fiakarana ny vidim-pidirana amin’ity fam­pi­sehoana ity satria 4000 Ar izany ho an’ny fidirana tsotra, 7000 ar ho an’ny fampandriahana ary 15.000 Ar kosa ho an’ny fanasana manokana.
PIMENT CAFE – BEHORIRIKA
Hampiaina indray ireo mozika rock ny tarika Kiaka
«Revy e! mihodina mirevy e!», io no loha-hevitra hisarihan’ny Piment Café ireo mpiala voly amin’ny zoma mahafinaritra anio alina manomboka amin’ny 9 ora. Hetsika izay ham­pi­aina indray ireo mozika rock, hiarahana amin’ny tarika Kiaka, ka handrenesana indray ireo hira nahafantarana ny tarika hatramin’izay sy ireo mozika rock namolavola ny hatanoran-dry Nini sy ny tariny. Ity no seho santatra ho an’ny tarika Kiaka amin’ity taona ity sy taorian’ny fanamarihana ny faha-25 taonan’ny tarika. Ao anatin’ny seho takariva toy izao dia mifanakaiky kokoa ny mpijery sy ny mpanakanto izay manamora kokoa ny fifandraisana sy ny fanentanana samihafa. Anisan’ireo mahay mampirevy ny mpijeriny rahateo i Nini, lehiben’ny tarika. Hoentin’ny tarika Kiaka ao anatin’ity seho takariva ity na ireo hira taloha nahafantarana azy toy ny «Izy roa kely», «Lasa», «Sabotsy alina», «Rovako»… sy ireo hira taty aoriana tao anatin’ny rakikira tsangambaton’ny faha-25 taona.
Mozika mahorey sy kaomôriana hiarahana amin’i Diho sy Maalesh
Tsy mitsahatra ny mandray vahiny ny Institut Français de Madagascar na ny IFM, etsy Analakely. Taorian’ilay mpitendry gitara maliana Vieux Fakra Touré, dia mozika mahorey sy kaomôriana indray no hiaka-tsehatra, ny zoma 18 janoary izao, manomboka amin’ny 7 ora hariva ary hiarahana amin’i Diho sy Maalesh, mpanakanto avy any Mayotte sy Comores. Mpahay mozika maoderina i Diho ary mitrandraka ny zava-maneno nentin-paharazana mahorey antsoina hoe «Dzendze ya shitsuva». Manome endrika hafa ny mozika entiny ny fampiarahana izany amin’ny gitara mandeha amin’ny herinaratra.
Sady mpahay mozika no poety kosa i Maalesh ary anisan’ny ahafantarana azy ny fampivadiana ny gadona avy aty Afrika sy avy any Atsinanana. Maalesh, izay efa nandrombaka anaram-boninahitra maro tamin’io fampivadiana gadona io raha tsy hilaza afa-tsy ny RFI, MASA, Visa Francophone, Musique Océan Indien…
Hanara-dia azy mirahalahy amin’io fampisheoana io i Jean Wellers (zava-maneno nentin-drazana kaomôriana) sy Jimmy Rakotoson (Amponga maroanaka)
Lahatry ny fiainana – Zanak’olom-pirahavavy tsy nifankafoy, niara-nodimandry Tao anatin’ny indray mipi-maso no namoizan-dRasoamanana Leonard ny zanany, Rasoamanana Xavier Laurent, ilay «agent de police 2ème classe» niasa teo anivon’ny primatiora sy ilay zanaky ny rahavavim-badiny, Randriamalala Jean Veve Roland, nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana tetsy Ambohimailala Ilafy, ny alakamisy 13 desambra lasa teo.
Tsatok’antsy maromaro no hita tamin’izy mirahalahy ireo tamin’ny fotoana nahitana ny razana.
«Tsy nisy nanam-po iny loza iny ny tato an-trano, tena tampoka tokoa ny fahafatesana. Toa nilatsaham-baratra ny iray trano nandre ilay loza», hoy ilay raim-pianakaviana, namerina ny zavatra tsapany ho niainany tamin’iny fotoana iny.
«Olona sisa no nitantara taminay fa hoe: nifampiantso tamin’ny finday izy roa lahy ireo fa efa azo ilay vola hakana entana ka mila mandeha amin’izay. Tetsy amin’ny «Complexe scolaire» Ampefiloha izy ireo no nisy nahita farany niaraka tamin’ny olona telo hafa nandray fiara mpitatitra 183, tsy fantatra kosa izay toerana alehany», hoy hatrany ilay rainy.
Toy ny tena mpirahalahy
Raha ny fitantaran’ity raim-pianakaviana ity hatrany dia «tena nifampitondra toy ny mpirahalahy iray tampo ireny mihitsy izy roa lahy namoy ny ainy ireo satria na ny fandriany tao an-trano aza dia mifanila, hifandimbiasana ny sigara fohana, miara-milalao «jeux vidéo» ao amin’ny efitranony».
Izay no antony voalaza fa niarahan’izy roa lahy ireo tamin’ilay naka entana satria volabe tokoa no nentin’ilay zanaky ny rahavavin-dreniny ka izy ihany no tena atokisany ka izay no mety ho niantsoany azy sy nahatafaraka hatrany azy roa lahy tamin’io andro nisehoan’ny loza io.
«Tsy fantatra na fifandrifian-javatra, fa niara-maty tamin’ny fotoana mitovy ihany koa izy roa lahy», hoy ihany Rasoamanana Leonard.
Manohy ny tantara taminfio andro mangidy ho anfny fianakaviana io izy: « Nisy olona tonga nilaza teto aminay ny maraina fa mbola tsy tonga nanatitra ireo entana nalainy izy roa lahy. Mbola tsy nisy nahalala teo ilay vaovao ratsy fa izaho no avy hatrany dia nahateny hoe: «maty ny zanako!»».
Fantatra fa nandeha teny Analamahitsy avy hatrany ity raim-pianakaviana ity taorian’izay, sady nihevitra fa mety ho any no misy azy roa lahy. Mbola teny ambony fiara anefa, raha ny filazany, dia niantso azy ny vadiny sady nanafatra mba hiverina fa misy vaovao ratsy be. Tamin’ny finday ihany koa no nilazan’ny olona taminy mba ho tonga eny Ambohimailala Ilafy fa maty any ny zanany lahy! «Kepoka aho teo ka fotoana elaela vao afaka nandeha tany amin’ilay toerana voalaza fa nahafaty azy», hoy ity dadan’ny maty.
Ny fitadidian’ity farany ihany koa no nampatsiahivany fa ny antoandron’io alakamisy maizina io dia mbola nilalao «jeux» tao an-trano io zanany namoy ny ainy io. «Rehefa nipaika anefa ny tamin’ny 3 ora dia lasa izy nivoaka nipetrapetraka niaraka tamin’ireo namany. Tsy fantatra na fifandrifian-javatra ihany koa na ahoana fa voatery nandeha nivoaka izahay mivady ary rehefa nahita azy niaraka tamin’ireo namany dia nikopakopaka azy, iny no fotoana farany nihaonanay telo mianaka, iny ihany koa no sahala amin’ny hoe: «kopa-tanana farany nifanaovanay mianaka», hoy ilay raim-pianakaviana sady nisafosafo loha.
«Tena mbola hahatsiarovana azy roa lahy avokoa ny fotoana rehetra niarahana tamin’izy ireo. Tena tsy mety mino ny saina hoe tsy eo intsony izy ireo», hoy ihany Rasoamanana Léonard.
Hetraketraky ny fiainana – Mitantara ny fahatsoran’i Michou, tovovavy 16 taona maty nisy namono, ireo akaiky azy «Enga anie ka homba anao Jesoa»! Io no hira noredonin’ny fianakaviana, ny tapaka sy naman-dRazafindrazaka Michaëlle Ramorasata na i Michou, teo am-pandevenana ity farany, omaly tolakandro teny Soavina Ambohimanga. I Michou ilay tovovavy kely 16 taona nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana ary hita faty tao anaty kirihitr’ala teny amin’ny Oniversiten’Antananarivo, afak’omaly antoandro. Tena mbola erotrerony. Tena nahabe fanantenana. Tena be fitiavana…
Mijoro vavolombelona amin’izany ireo rehetra nifanerasera taminy. Misy tamin’ireo namany, tena mpiresaka taminy, no namboraka fa toa efa nandindona ity tovovavy ity ny fahafatesana. Tsy nisy kosa ny nanam-po hoe vono olona mahatsiravina no handaozany ity tany ity. Noho ny fahasimban’ny razana dia tsy mba nandrasana tany an-tranony akory izy fa nalaina teny amin’ny trano fiandrasam-paty, nandalo tao am-piangonana ary napetraka avy hatrany teny amin’ny fasan-drazany.
«Isa-maraina izy dia tonga ao aminay foana miantso ahy andeha hianatra, satria samy monina eny Ankaraobato ihany koa izahay. Mifampiresaka izahay eny an-dalana. Mbola tonga niantso ahy izy ny marainan’ny zoma teo», hoy Raharilanto Mampionona, tovolahy namany akaiky sady mpiara-mianatra aminy ihany koa.
Ny mbola tena mampalahelo ahy hatramin’izao, hoy ity tovolahy ity nanomboka nanganohano, dia roa andro talohan’io zoma io no niresaka tamiko izy fa maty voadonan’ny môtô ilay dadatoany. «Tadidiko ny teniny nanao hoe: ny fahafatesana lesy rehefa ho tonga dia tsy azon’ialahy sakanana mihitsy a! Sady tsy fantatr’ialahy mihitsy hoe rahoviana».
Isan’ny notantarain’i Mampionona fa ambetin-dresak’i Michou teny an-dalana hatrany am-pianarana tamin’io zoma io ihany koa ny hoe: «Faly be aho fa vita androany ny fanadinako!».
Vao noraisina mpiandry
Hatramin’ny mpitondra fivavahana dia nahafantatra ny hatsaram-pon’ity tovovavy nindaosin’ny fahafatesana, izay tao anatin’ny laingon’ny hatanorana ity. «Zaza hendry sady mahay ary tia vavaka izy, porofon’izany ny vao nandraisana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo azy ny taona lasa teo», hoy pasitera Rakotoarimalala Romuald, mpitandrina ao amin’ny fiangonana Malaza Gileada. «Vao tamin’ny herinandro izy no hitako teny Anosy nitondra kitapo kely andeha hianatra sahala amin’ireny tsy ho faty ireny. Ozona ho an’izay nahavita ny heloka io, fa ny azy kosa efa resiny ny ozona», hoy ilay pasitera nanohy ny fijoroany vavolombelona.
«Tokony ho fantatr’izay nahavanona ny loza, hoy ity mpitandrina ity, fa tsy mahazo famelan-keloka izay mpamadika sahala amin’i Jodasy». «Fitsiriritana endrika ve? Sa fialonana fahaizana?», hoy ilay pasitera nanontany ireo tonga nanotrona ny fanaovam-beloma farany, no anton’ny namonoana ity mpino tao amin’ny fiangonany ity .
«Lasa mialoha izy hanomana ny fahatongavantsika», hoy ny torinteniny sady nitodika tamin’ireo Ray aman-drenin’i Michou sy ireo zandriny roa.
Ankizy tsotra sady tia mifandray aman’ny olona i Michou. Izay avokoa no ambetin-dresak’ireo rehetra nanontaniana mikasika ny toeran’ity zazavavy namoy ny ainy ity. «Tsy misy tsy mifandray aminy ny olona rehetra eo an-tanàna. Tsy mba mihafahafa mihitsy izy amin’ireo izay tonga eo aminy», hoy ny fitantaran-dRahelinjanahary Annie, nenitoan’ny maty. Nampiany fa tia sangisangy sy miran-dava, izay foana no ahitana azy. Tsy vitan’izay fa «efa nandraindrain’ny fianakaviana ho lasa lavitra teo amin’ny fianarana izy saingy izao no niafarany», hoy ity nenitoany namarana ny teniny sady namafa ranomaso.
Tsingerin-taona tsy tanteraka
«Ny tena mampalahelo ahy, dia efa vita lamina ny saika hampiarahana ny fety hankalazana ny fitsingerenan’ny taona nahaterahany, amin’ny 6 febroary, sy ny an’ireo zanako izay amin’ity faran’ny volana ity. Izao nefa izy maty izao», hoy indray Razafindraliza Françoise na i Nounou, mpiara-monina sady nifanakaiky am-po taminy.
Raha ny filazany dia i Michou no nampianatra ireo zanany ka nahafahan’izy ireo ny bakalorea. «Izao anefa dia maty noho ny hetraketraky ny sasany», hoy i Nounou namarana ny teniny tamin’ny feo efa mangovingovitra.
Tsy mbola misy mangirana ny fanadihadiana sy famotorana mikasika izay mety ho antony namonoana an’i Michou. Ny borigadin’ny polisy misahana ny heloka bevava no mandray an-tanana ny raharaha.
Mandra-piandry izay fivoaran’ny toe-draharaha dia vory lanona ny namany mpiara-mianatra taminy tetsy amin’ny Fjkm Malaza Gileada nanotrona farany sy nanao veloma ity namany nalazo vao erotrerony. Tamin’ny 12 ora sy sasany teo ho eo no tonga teny am-piangonana ny razana, ranomaso no nandraisan’ireo ankizy efa ho an-jatony ny trano vorona nitondrana azy.
Notsenain’ny feon’orga sy ilay hira «E! Jehovah no mpiandry ahy» ny razana tao amin’ny tranon’Andriamanitra. Feon’orga miantsa ilay hira «Jesoa sakaizanay» kosa no namaranana ny fanaovam-beloma farany azy sy namoahana ny trano vorona tao am-piangonana. Veloma farany tena nangidy tokoa ho an’ireo rehetra nahafantatra an’i Michou…
Soratra : Haja Randrianantoandro
Sary : Hery Rakotondrazaka
Fanadihadina manokana – Mampidi-doza sy vidiana lafo ny fihinanana antibiotika amin’ny tsy tokony ho izy ZAVA-DOZA HO AMIN’NY FAHASALAMANA ARY VIDIANA LAFO NY FIHINANANA ANTIBIOTIKA KANEFA TSY NAHAZOANA TOROMARIKA MIALOHA AVY AMIN’NY MPITSABO. METY HISY ANTIBIOTIKA HANDAITRA INTSONY MIHITSY ATSY HO ATSY RAHA MITOHY NY FIZIRIZIRIN’NY TSIMOK’ARETINA AMIN’NY ANTIBIOTIKA NOHO NY FIHINANANA ITY FANAFODY ITY AMIN’NY TSY TOKONY HO IZY, ARAKA NY NAMBARAN’IREO MPITSABO.
Fanafody enti-miady amin’ireo aretina azo avy amin’ny tsimok’aretina bakteria ny antibiotika. Manaporofo anefa ireo tarehimarika azo teny anivon’ireo tobim-pahasalamana fa tsy mitsahatra ny mahazo vahana ny fampiasana io fanafody io amin’ny tsy tokony ho izy, hany ka miteraka ny fizirizirin’ny tsimok’aretina amin’ny antibiotika ampiasaina aminy.
“Ny 60%-n’ireo marary miditra eto amin’ny sampan-draharaha mandray an-tanana ireo aretina azo avy amin’ny tsimok’aretina bakteria dia efa avy nihinana antibiotika fahatany sy samirery ivelan’ny toeram-pitsaboana avokoa, saingy tsy nandairan’ny fanafody nohaniny ka tonga ety aminay rehefa mitarazoka ilay aretina mahazo azy. Manodidina ny 2% eo indray ireo olona efa tena tratry ny aretina noho ny tsy fandairan’ ny antibiotika amin’ireo tsimok’ aretina ao aminy intsony mihitsy”, hoy Pr Andrianasolo Rado, eo anivon’ny sampan-draharaha misahana ireo aretina avy amin’ny tsimok’aretina etsy Befelatanana.
Antibiotika diso fatra
Na mifanandrify amin’ny aretina mahazo ihany ilay antibiotika saingy diso ny fatrany, na tsy mifanandrify amin’ilay aretina mihitsy ka izay no mahatonga ilay tsimok’aretina lasa mihamahazo tanjaka sy tsy laitran’ny fanafody tokony hahafaty azy. Araka izany, dia mitaky fanafody matanjaka kokoa ny famonoana azy.
Raha ny fanazavan’ity profesora ity ihany mantsy dia tsy maintsy miforona io fizirizirin’ny tsimok’aretina ao anatin’ny vatana io vantany vao mihinana antibiotika ny olona iray. “Misy tsimok’aretina ilaina sy tsy ilaina ao anatin’ny vatantsika ao. Raha tsy mpitsabo anefa no manome ilay antibiotika dia sady mety ho matin’ilay antibiotika nohanin’ilay marary tamin’ny tsy tokony ho izy ireo tsimok’aretina ilaina. Lasa mihamatanjaka manaraka izay ireo tsimok’aretina tokony hovonoina no sady mihamaro ao anatin’ny vatana. Tokony ho ny mpitsabo ihany vokatr’izany no manome fanafody ny marary. Izy no mahalala ny karazana fanafody tena mamongotra ny aretina mahazo ny marary, izy no mahalala ny fatrany sy ny fetr’andro hihinanana izany”, hoy Pr Andrianasolo Rado.
Manana hadisoana ny farmasianina sy mpitsabo
Antony maro no mifamatotra ka mahatonga ity fihinanana antibiotika amin’ny tsy tokony ho izy ity raha ny fanazavana azo teny anivon’ireo mpiasan’ny fahasalamana. Voalohany amin’izany ny tsy fahatongavan-tsaina amin’ny maha-zava-doza ny fanaovana “dokotera tena”, hany ka vantany vao isehoana trangan’aretina, ohatra, dia mihinana antibiotika izay heveriny fa mety handaitra amin’ilay aretina mahazo azy. “Misy antony anefa matoa mampanao fitiliana ra antsoina hoe ‘’antibiogramme’’ ny mpitsabo mialoha ny hihinanana antibiotika iray. “Io fitiliana io no hamantarana ny karazana tsimok’aretina mahazo ilay marary sy ny antibiotika tena mandaitra amin’izany tsimok’aretina izany. Mety ho antibiotika tsy mahafaty ilay tsimok’ aretina akory mantsy no hohanina raha manao dokotera tena”, hoy Dr Rakotobe Andriamaro.
Mbola mipetraka ihany koa ny olan’ny fahefa-mividin’ ireo marary. “Mety nanatona mpitsabo ihany izy saingy tsy arany ny fihinanana ny fanafody nomena azy. Nitsahatra teny anelanelam-potoana ny fitsaboana hany ka tsy maty tanteraka ireo tsimok’aretina ka nihanatanjaka. Mety ho nahazo ny fanafody nilaina ihany anefa izy saingy tsy nanaja ny fe-potoana hihinanana ny fanafody satria nihevi-tena ho sitrana”, hoy ireo mpitsabo.
Izay tsy fananana fahefa-mividy izay ihany amin’ny ankapobeny no hanazavan’ireo marary sasany ny antony hanatonan’izy ireo ireny toeram-pivarotana fanafody mora kanefa tsy manara-dalàna sy mety hamoa-doza, toa an’Ambohipo ireny. Manamora ny fihinanana fanafody tsy ara-dalàna ihany koa anefa ny fivarotana fanafody eny amin’ireo toeram-pivarotana enta-madinika sasany.
Notsorin-dRajaosafara Baovola, sady farmasianina no filohan’ny komitim-pirenena misahana ny ady amin’ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna, etsy an-kilan’izay, fa “misy aminay farmasianina mihitsy no minia manome fanafody marary na fantatra aza fa mitaky taratasy avy any amin’ny mpitsabo ny fahazoana izany fanafody izany. Isan’ny fanafody mila taratasy avy amin’ny mpitsabo ireo ny antibiotika”.
Niaiky ihany koa Dr Rakotobe Andriamaro fa “misy aminay mpitsabo mihitsy no manao ho toy ny fahazarana ny fanome­zana antibiotika ireo marary ka mahatonga ny olan’ny fizirizirin’ny tsimok’aretina amin’ny antibiotika”.
Antibiotika amin’ny voly sy fiompiana
Endrika iray mahatonga io fizirizirin’ny tsimok’aretina amin’ny antibiotika io, nambaran’ny Dr Rakotobe Andriamaro, ihany ny fampiasan’ireo tantsaha sasany antibiotika natokana ho an’ny olombelona amin’ny voly sy ny biby fiompy. “Miditra any anatin’ny vatantsika ireny fanafody ireny ka mahatonga ihany koa io olan’ny fizirizirin’ny tsimok’aretina amin’ny fanafody io”, hoy izy.
Izao tontolo izao mihitsy anefa no tandindomin-doza satria mifindra io fizirizirin’ny tsimok’aretina amin’ny antibiotika io. “Misy mivoaka any amin’ny maloto iny tsimok’aretina tsy andairan’ny antibiotika iny ka mikasoka amin’ny tanana. Raha tsy misasa, araka izany, ilay tanana dia mety hamindra amin’olon-kafa, raha sendra tafiditra any am-bava ohatra… Mety ho lasa any amin’ny rano fisotro ihany koa ilay maloto, ka ny fisotroana iny rano iny dia lalana iray hifin­dran’ireo tsimok’aretina tsy andairana antibiotika…”, hoy Pr Andrianasolo Rado, nanome santionany amin’ireo fomba fifindran’izany. “Na ny piti-drora aza dia mety hamindra izany”, hoy Dr Rakotobe Andriamaro.
“Nampiahiahy ahy ilay mpanampiko”,hoy i Maholy Andriamihaja
Tao anatin’ny dimy taona dia nihamaro ireo zaza tratran’io fifindrana io. “Tsy mihinana antibiotika akory ilay zaza kanefa rehefa atao ny fitiliana mahakasika ny aretina mahazo azy dia hita fa misy tsimok’aretina tsy laitram-panafody ao aminy”, hoy Randrianjafinimpanana Heritiana, mpitsabo manokan’ny zaza, ao amin’ny hopitalin’ ny reny sy ny zaza, etsy Tsaralalàna.
Isan’ireo efa niharan’izany ny zanak’i Maholy Andriamihaja. “Telo volana sy tapany ilay zanako tamin’izay fotoana izay. Tratry ny aretin’ny taovam-pivalanan-drano azo avy amin’ny tsimok’aretina bakteria izy. Rehefa nivalan-drano mantsy izy dia misy ra mandeha. Nentina tany amin’ny mpitsabo ilay zaza saingy tsy nisy nandaitra izay fanafody nomena azy.
Taorian’ny fitiliana natao tety amin’ny hopitaly vao fantatra fa misy tsimok’aretina bakteria tsy andairana antibiotika tsotra tao anatiny. Tsy mbola nihinana antibiotika izany mihitsy anefa ilay zanako. Naharitra 10 andro ny fitsaboana. Midangana ny fanafody satria ny vidin’ny antibiotika nitsaboana azy no efa nisy Ar 80 000 isan’andro nandritra ny 10 andro”, hoy izy.
Nambaran’ny mpitsabo fa nisy olona namindra io tsimok’aretina io tamin’ilay zaza. Ny mpanampy tao an-trano mpitaiza ny zanany no niantefan’ny ahiahin’ity renim-pianakaviana ity. “Nilaza tamiko io mpanampiko io fa nihinana antibiotika rehefa narary nify andro vitsy nialoha ny nisehoan’ny aretin’ilay zanako. Tsy nanantona mpitsabo izy nialoha ny nihinanany io fanafody io”, hoy ihany i Maholy Andriamihaja.
Efa nisy lany hatramin’ny Ar 6 tapitrisa tao anatin’ny 15 andro
Notsipihan’ireo mpitsabo fa tena lafo tokoa ny vidim-panafody hamonoana io tsimok’aretina miziriziry amin’ny antibiotika tsotra io. “Efa nisy zaza marary nandaniana Ar 6 tapitrisa nandritra ny 15 andro teto aminay teto. Tsara ho fantatra anefa fa tena mahafaty izy io raha toa ka tsy araka ny fanafody satria mihanaka ao anatin’ny vatana ilay tsimok’ aretina rehefa tsy voatsabo. Izay no antony tokony hitandremana amin’ny fihinanana fanafody”, hoy hatrany Dr Randrianjafinimpanana Heritiana.
Loza ho an’izao tontolo izao mihitsy ity fizirizirian’ny tsimok’aretina amin’ny antibiotika ity “satria raha mitohy izao dia tsy hisy antibiotika handaitra intsony mihitsy”, hoy indray Dr Rakotobe Andriamaro. Notsipihiny fa ny ankamaroan’ireo antibiotika noforonin’ireo mpikaroka dia efa nahitana io trangana tsy fandairana io avokoa. “Raha ny taona 1943 no nahitana ny ‘’pénicilline G’’, ny taona 1946 dia efa nisy trangana tsy fandairana hita taminy. Torak’izany ihany koa ny “ampicilline”, izay hita tamin’ny taona 1961 kanefa efa nahitana trangana tsy fandairana ny taona 1973. Ny “ciprofloxacine’’, izay hita tamin’ny taona 1987 ka nahitana tsy fandairana ihany koa ny taona 2006… Tsy vitan’izay fa efa mihavitsy ny antibiotika hitan’ny mpikaroka ankehitriny”, hoy izy.
Raha ny nambarany ihany dia efa mikatro-doha ireo mpikaroka any ivelany any ankehitriny hamerana ny vokatr’io tsy fandairan’ny antibiotika io. “Ny “bactériophage” na ny famonoana ny tsimok’aretina amin’ny alalan’ny viriosy tsy mankarary ny olombelona no ifotoran’ny fanantenana amin’izao fotoana izao. Nialoha ny nahitana ny antibiotika no efa nisian’izy io saingy adinodino satria ny antibiotika no hita fa mandaitra haingana kokoa ka nironan’ireo firenena rehetra amin’ny ankapobeny. Nialoha ny taona 1994 anefa dia efa manomboka miverina mifototra tsikelikely amin’io “bactériophage’’ io ireo firenen-dehibe”, hoy hatrany Dr Rakotobe Andriamaro.
Soratra: Hanitry Ny Aina
Sary: HNA/Sergio Maryl/Claude R.
Lozam-pifamoivoizana teny Ambohidahy – Nijalijaly efa ho iray volana mahery vao maty i Valisoa kely Teo amin’ny fahatelo taonany no namoy ny ainy Randrianirina Valisoa Fanantenana, ny alakamisy teo. Isan’ireo tra-doza tamin’ilay lozam-pifamoivoizana nahatsiravina tetsy Ambohidahy Ankadindramamy, izay niseho tamin’ny 7 desambra ity zazalahy kely ity. Ny reniny kosa dia maty tsy tra-drano tamin’iny loza iny.
«Tena nijaly ilay zanako vao namoy ny ainy, potika avokoa ny taovany rehetra raha ny nambaran’ny dokotera. Efa nitsipaka ilay aretina ihany izy saingy tsy vitany intsony!», hoy Randrianirina Jean Baptiste, rain’i Valisoa.
«Niala tato an-trano izy mianaka handeha hividy kapa ho an’ilay zokiny no nitranga iny loza iny. Ilay reniny teo no ho eo ihany dia maty fa izy kosa mbola avotra ary nentina teny amin’ny hôpitaly», hoy ihany ity raim-pianakaviana ity, nisento tokana, namerina nitantara ny zava-niseho.
Namidy avokoa ny tao an-trano
«Tapitra namidy avokoa ny entana rehetra tato an-trano hitsaboana azy. Ny ampitson’ny nidirany teny amin’ny hôpitaly dia nandalo fandidiana izy, satria nisy vaky ny tsinainy. Ny ampitson’io andro nahafatesany io ihany koa izy dia tokony mbola handalo fandidiana fanindroany. Nolazain’ireo dokotera tamiko fa misy taova potika ao anatiny vokatry ny hamafin’ny dona nahazo azy ka izay no tsy maintsy hanaovana an’io fandidiana io indray», hoy hatrany ny rain’ny maty.
Ity farany izay nilaza fa niezaka nitady vola hividianana ireo fanafody ilaina amin’ny fandidiana ny antoandron’io alakamisy io.
«Tsy hitako intsony teo hoe handeha ho aiza aho fa dia nandeha fotsiny. Nankany amin-dry masera aho avy eo ka izy ireo no nanaiky hanome vola hanaovana fandidiana azy fanindroany», hoy ity raim-pianakaviana namoy ny menaky ny ainy sy ny vadiny ity.
«Hariva ny andro vao tonga teny amin’ny hôpitaly aho. Nipetrapetraka kely aho dia nitaraina mafy niantso ahy ilay zanako, izahay mianaka mantsy tsy mifankafoy mihitsy, na ny reniny aza tsy atakalony ahy. Nitaraina mafy ho marary be ao amin’ny kibony izy sady miantso ahy, tsy hitako izay natao. Tsy nijanona mihitsy ny feo keliny miantso ahy nandritra ny dimy minitra teo ho eo. Niantso ny reniny izy avy eo dia tsy niaina intsony», hoy i Jean Baptiste, nitantara ny fiainan-janany farany teto amin’ity tany fandalovana ity.
«Raha zohiana, dia sahala amin’ireny niandry ahy ireny izy vao nandeha», hoy ihany i Jean Baptiste.
Tsy nampiarahana tamin’ny reniny
Teny Andraisoro ihany no nalevina i Valisoa noho ny tsy fahampian’ny teo am-pelatanana.
«Efa lany volabe izahay tamin’ny fitsaboana azy teny amin’ny hôpitaly, ny reniny rahateo lavitra ny toerana ilevenany, any Ambohidranandriana Antsirabe II. Raha ny fikasana dia nampiarahana tamin’ilay reniny izy, saingy tsy afa-manoatra moa», hoy ny fanazavan’ilay raim-pianakaviana.
«Tamin’ny androtry ny fandevenana ilay reniny dia tsy maintsy ny rahavavin-dreniny no nampiandrasina tany amin’ny hôpitaly fa izaho nandeha nandevina ilay reniny tany Antsirabe, mbola tsy misy mahita mantsy ny lalana mankany aminay ka tsy maintsy nandeha aho, ny saiko amin’io aty amin’ilay zanako marary ihany. Fony izy mbola teny amin’ny hôpitaly dia tsy misy olona itarainany afa-tsy izaho, na misy olon-kafa miandry aza eny dia tsy mba iresahany fa rehefa tonga aho vao sahy mitaraina izy», araka ny fitantaran’i Jean Baptiste ihany.
«Teny amin’ny hôpitaly izahay efa-mianaka kely no nankalaza ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona. Tamin’ny fahavelon’ny reniny anefa dia efa vita lamina avokoa ny fankalazana ny fety fa hoe hoentina eny Ambohijatovo ireo ankizy hitsangatsangana. Tsy izay anefa no zava-nisy fa fahoriana foana no natrehina. Saika amin’ity taona ity ihany koa ity zanako faralahy ity no nampidirina nianatra, saingy izao izy namoy ny ainy izao», hoy ilay raim-pianakaviana sady nisafosafo loha no nanganohano.
Ny sabotsy teo no nalevina tetsy Andraisoro, teny akaikin’ny tranony i Valisoa.
Ny Salamo 23: 4 manao hoe «na dia hamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho dia tsy atahotra ny loza aho» no teny fampiononana nosafidian’ny fianakaviany.
Zandary vehivavy – Vonona hanenjika an-dRemenabila MBOLA TANY AMIN’NY KOLEJY NO EFA NANONOFY NY HO LASA MPITANDRO NY FILAMINANA ANDRIANARY NIRISOA YVETTE. MANAMBONINAHITRA Lietnà IZY AMIN’IZAO FOTOANA IZAO ARY HANY TOKANA VEHIVAVY MANAMBONINAHITRA ZANDARY. NANDALO DINGANA MARO ITY Lietnà ITY VAO TONGA AMIN’IZAO NOFINOFINY IZAO. MARO IREO VEHIVAVY ZANDARY MANIRY NY HO LASA LAVITRA. VONONA AMIN’IZAY ASA AMPIANDRAIKETINA REHETRA EO AMIN’NY SEHATRY NY FITANDROANA NY FILAMINANA…
Manao fanamiana «tenue de combat», misalotra ny galona bokotra roa na Lietnà, Andrianary Nirisoa Yvette, eo am-panomanana fanadinana, teny amin’ny toby Ratsimandrava izy, no noresahina. «Manao fanadinana izahay izao. Taorian’ny nivoahana tany amin’ny Akademia Miaramila dia mianatra foana aloha izao no ataonay. Aorian’ny eto an-drenivohitra dia any Moramanga indray ny fiofanana manaraka haharitra enim-bolana», hoy izy.
27 taona ity Lietnà vehivavy ity. Tsy namelany mihitsy raha tsy tanteraka ny nofinofiny. Toy izao ny fitantarany ny antony nanosika azy hanao zandary: «Nahita ireny horonantsary amin’ny fahitalavitra ireny aho dia voasarika hoe ohatran’ny mba tsara kosa izany vehivavy manao ny asan’ny mpitandro ny filaminana izany. Dia nanao fifaninanana foana raha vao nahazo ny diplaoma ahafahana mirotsaka saingy tsy nety afaka mihitsy. Tamin’izany koa moa ireny sekoly manamboninahitra miaramila any ivelany ireny no tena nataoko satria teto amintsika tsy mbola nisy vehivavy ny miaramila na zandary».
Tao amin’ny sekoly tsy miankina iray teto an-drenivohitra no nandranto fianarana mitantana na «management» Andrianary Nirisoa Yvette. «Vao nisy ny fifaninana hidirana tany amin’ny Akademia Miaramila, tany Antsirabe ho an’ny vehivavy, dia nandray anjara avy hatrany aho. Nety tamiko rahateo ilay mason-tsivana hidirana tany. 16 izahay no vehivavy tafiditra saingy samy manana ny fahaizany manokana daholo. Ny sasany dokotera, ny sasany mpitsabo biby sy ny maro hafa», hoy izy.
Mahakasika ny zandary indray dia tsy nanampo loatra ny ho lasa izany ny tenany. «Tsy dia noeritreretiko loatra aloha ilay ho lasa zandary. Saingy izay angamba no anjara. Tiako be ilay izy amin’izao satria hitako ho mandray anjara betsaka amin’ny fampandrosoana ny firenena ny zandary», hoy ihany Lietnà Yvette.
Ny taona 2009 no nanambady ity vehivavy manamboninahitra ity. Raha ny lafiny tokantrano indray dia am-pahatsorana no nilazany fa «lafiny roa samy hafa mihitsy no handraisany izany. Hafa ny asa amin’ny maha zandary ary hafa mihitsy koa ny ao an-tokantrano». Raha ny fianakaviany indray dia nisy tamin’izy ireo no taitra raha vao nahalala fa lasa miaramila i Yvette. «Nisy mihitsy no natahotra hoe sao tsy ho vitako izany fa taty aoriana niaiky daholo ihany», hoy ihany izy.
Tany amin’ny Akademia
Tsy mora ho an’Andrianary Nirisoa Yvette ny fiofanana herintaona tany amin’ny Akademia miaramila, tany Antsirabe. Tsy mitovy tamin’ireo nanana bakalorea niampy fianarana roa taona no nidirany tany fa ilay antsoina hoe «peloton spéciale». Izany hoe efa manana ny mari-pahaizana efa-taona taorian’ny bakalorea raha kely indrindra vao afaka mifaninana. Izay no mahatonga azy bokotra roa raha vao nivoaka ny sekoly fa tsy mitovy tamin’ireo Lietnà vao nivoaka ny Aakademia, izay mbola bokotra iray aloha.
«Raha ny tany an-tsekoly miaramila indray dia azo lazaina fa tena henjana tokoa. Tsy misy ny maha vavy na lahy fa mitovy daholo ny zavatra atao. Ny paikady na teknika nampianarina anay dia iray ihany. Raha tsy hoe angaha bevohoka, hafa indray izay. Ny zavatra nahafinaritra ahy indrindra kosa tany amin’ny fiofananay dia ilay midina amin’ny tady amin’ny école des rochets, tany Tongafeno», hoy ity manamboninahitra zandary vehivavy malagasy voalohany ity.
Hanenjika an-dRemenabila Taorian’ny nivoahany ny sekoly ny taona 2011 dia nampianatra tany amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena tany Ambositra ny Lietnà Yvette. Rehefa nanontaniana mahakasika an-dRemenabila ny tenany dia tsotra no navaliny. «Raha voatendry ho any aho dia tsy maintsy mandeha. Ny teknika ampiasaina anie iray ihany na lahy na vavy ny zandary e», hoy izy tsy maka sarotra.
Ao amin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena no miasa amin’izao fotoana izao ity vehivavy manamboninahitra ity. «Tsy misy zavatra mora fa ny toe-tsaina no atao avo dia tratra foana ny tanjona. Tsy ny herim-batana ihany koa no mitondra ny fiainana fa ny herin-tsaina. Ho an’izay maniry ho lasa zandary kosa dia ny fitiavana ilay zavatra atao aloha no tokony ho masahana ao an-tsaina. N’inona n’inona mitranga dia hatrehina. Ilaina ihany koa anefa ny fifantohana amin’ny zavatra atao », hoy ity Lietnà ity teo am-pamaranana sady nanamafy fa mahafehy mitana fitaovam-piadiana rehetra izy ankehitriny raha somary natahotra nitazona grenady tany am-boalohany.
Isan’ireo zandary vehivavy voalohany ihany koa Rakotomalala Faramalala, 21 taona. Hentitra dia hentitra izy rehefa miresaka no sady amin’ny teny fohy nefa mahalaza zavatra. «Faly aloha izaho lasa zandary. Mahafinaritra ahy ilay asa satria manana ny hasiny manokana omen’ny olona azy ny zandary. Raha fintiniko indray ny tany an-tsekoly dia mafy. Ny zavatra tsara kosa anefa dia voaray tahaka ny anabavy izahay tany raha mitaha tamin’ireo mpianatra zandary lehilahy. Zakanay daholo ny fiofanana fa tsy nisy niala an-daharana mihitsy», hoy ity zandary mpiana-draharaha ity.
Rasolondraibe Onjatahiana Sandra
Samy nanana ny fandraisany ny fiofanana narahin’izy ireo tany amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena ireo vehivavy. Ho an’i Sandra, zandary mpiana-draharaha vao 25 taona monja dia nilaza ho somary natahotra izy tany am-boalohany. «Manaraka ny toromariky ny lehibe ihany anefa dia mandeha tsara ihany. Mazoto tsara aho hanenjika an-dRemenabila», hoy izy.
Miparitaka manerana ny Nosy ireo zandary vehivavy mpiana-draharaha ireo amin’izao fotoana izao. Ho an’ny eto an-drenivohitra manokana dia telo vavy izy ireo no miasa ao amin’ny tobim-paritry ny zandary eny Betongolo ka isan’ireo izy roa vavy ireo, izay samy tsy mbola misy manambady. Misy ihany koa anefa ireo any amin’ny manodidina toy ny eny Talatamaty.
Sary: (Nomena), Sergio Maryl
Fiainana mpanakanto – Fikomiana no nisafidianan’i Hanitra ny taovolony Mpanakanto nitondra avo ny kolontsaina malagasy, tamin’ny alalan’ny mozika, ary naneho ny vakoka nentin-drazana tamin’ny firenena maro. Ny taovolony anefa no tena nampiavaka sy nahavariana ny olona tamin’i Hanitrarivo Rasoanaivo na i Hanitra, izay mpihira sy mpitarika ny tarika Bé.
Tsy nihambahamba i Hanitrarivo Rasoanaivo na i Hanitra nilaza fa anisan’ny nanosika azy hanana ny taovolony, somary miavaka amin’izay fahita amin’ny andriambavilanitra, ny fitiavany miala amin’ny voalaza fa manaraka ny fitsipika. Azo atao hoe mihoa-pefy, tsy voafehy, tia mikomy… saingy nohazavain’i Hanitra ao anatin’ny foto-pisainany ny hoe «mety ary misy azo atao ihany koa ireo tsy manaraka fitsipika». Zanak’olona mpitana ny nentin-drazana i Hanitra ary nambarany fa fikomiana no nisafidianany ny taovolony izay sola ny sisiny, nefa somary lava ny eo afovoany sy ny any aoriana. Araka ny fitantarany dia lava volo be izy taloha ary nanaraka ny hevitry ny ray aman-dreny, fa rehefa vehivavy dia tokony ho lava volo. «Vao afaka bakalorea aho anefa dia nokakasako ho sola tanteraka ny lohako. Entiko hanaporofoana izany fa mety ihany koa ary azo atao ny tsy manaraka fitsipika», hoy ihany izy.
Isaky ny roa andro
Voalazan’i Hanitra fa ao anatiny ary feon’ireo razambe fahagola tany no nanosika azy hametraka sy hitondra io taovolo io. Ankoatra ny maha mpanakanto azy, dia mpikaroka ihany koa izy. Vokatra hitany ohatra ny hoe ny foko Makassar sy ny Panane avy any Indonezia, izay voalaza fa niandohan’ny Malagasy, dia efa nanana io taovolo io. «Mitovy tamin’ny fomba fiainan’izy ireo rahateo ny lalana nodiaviko», hoy ihany i Hanitra.
Foko mpandehandeha ary tsy mijanona raha tsy mahita Nosy ny Makassar. Nomarihiny manokana fa izy dia niainga teto Madagasikara, nandalo tany Angletera sy nosy Maorisy ary izao miverina eto Madagasikara izao.
Toy ny vehivavy rehetra, dia manana fotoana manokana hikarakarana ny volony i Hanitra. Isaky ny roa andro no tsy maintsy kakasana ireo volo amin’ny sisiny.
Ankoatra ny taovolo, dia manana ireo mampiavaka ihany eo amin’ny lafiny fitafy ity mpanakanto ity. Ankafiziny ny loko marevaka, toy ny mena sy ny volomboasary manopy mena. Olona tia mamorona izy ka maro amin’ireo fitafiana, firavaka ary kojakoja entiny no izy ihany no nanamboatra azy.
Mbola tao anatin’ny fokomiana no nandehanan’i Hanitra voalohany tany andafin’ny riaka, ka nanokatra ny lalany teo amin’ny sehatry ny mozika sy nahatonga azy ho mpanakanto matihanina. «Raha ny fanirian’ny ray aman-dreny dia ny ho mpanamory fiaramanidina no tian’izy ireo hataoko», raha ny fahatsiarovany. Nifandraika tamin’izay rahateo ny fianarana nasainy natao. Kilasy fahavalo izy no afaka Bepc ary kilasy voalohany (serie C) no afaka ny fanadinana bakalorea ary nanohy ny fianarana teny anglisy teny amin’ny Oniversite. Nisy ny fandraran’ny ray aman-dreny tamin’ny fikasany hiasa any ivelany. «Amboletra no nataoko. Nokarakaraina mangingina ny pasipaoro sy ny namany fa tonga tany aho vao nanoratra ho azy ireo hoe tonga soa aman-tsara aty Londres ary salama tsara…», hoy ihany izy nitantara ny nandehanany tany ivelany tamin’ny 1989.
Nandritra ny fety niarahany tamin’i Noro (rahavaviny) no nahitan’ny mpamokatra iray ny talentany teo amin’ny sehatry ny mozika. Efa nankafy mozika hatramin’ny fahazazany izy ary ireo manodidina azy, toy ny ray aman-dreny, ny havany dia niaina tao anatin’ny mozika. «Vitsy angamba no mahalala fa anisan’ireo raiamandrenibenay ny tarika Ny Antsaly ary anisan’ireo mpitarika sy nanoro lalana Randafison, izay hany sisa afaka nifampiresaka tamiko», hoy i Hanitra. Anisan’ireo zava-maneno ankafiziny ary iray amin’ireo karazan-java-maneno 17 ampiasainy rahateo ny valiha. Mialoha izany anefa dia efa nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fampahafantarana ireo vahiny ny mpanakanto malagasy izy raha tsy hilaza afa-tsy ry Jaojoby, Levelo, Gégé, Volambita…
Noho io lalana nisokatra io dia niantso an’i Sammy, izay nitrandraka ireo zava-maneno nentin-drazana i Hanitra, ka teraka teo ny tarika Sammy, niova ho Tarika sy tarika Bé, taty aoriana.
11 septambra 2001
Fa tranga iray nitondra fahamatorana kokoa ho an’i Hanitra na teo amin’ny maha olona na teo amin’ny sehatry ny mozika ny tranga tamin’ny 11 septambra 2001. Nanao fitetezam-paritra tany Etazonia izy nandritra io fotoana nisian’ny asa fampihorohoroana ka nampirodana ny trano nijoalajoala «World trade center» io. Tokony ho any California izy ny andron’ny 11 septambra 2001.
Nampiady hevitra teo amin’ireo mpikambana ny fanohizana na tsia io fitetezam-paritra io, noho ny fahavoazana goavana loatra nihatra tamin’i Etazonia. Nampifandona ary nampisintaka ny mpikambana sasany tao anatin’ny tarika mihitsy aza izany, satria na tsy nisy aza ny fiaramanidina dia nitohy tamin’ny fandehanana fiara ny dia nankany Texas.
Taorian’ireo seho ireo no nanapa-kevitra fa hody an-tanidrazana i Hanitra ary nanangana ny ivon-toerana ho an’ny zavakanto na ny «antshow» eny Ambohitsoa, izay toerana nahalehibe azy.
«Niaina tao anaty ala izahay tety ary izay fiainana izay no nahatonga anay ho tsy mihinan-kena na végétarien», hoy izy raha nahatsiaro ny fahazazany. Fiainana izay nanefy azy koa ho olona tia sy mpiaro ny tontolo iainana. Izy rahateo no tompo-marika tamin’ny fananganana ny sehatra iray ahitana ny mpanakanto sy ny tontolo iainana. «Fototra iray iaingan’ny aingam-panahy ny tontolo iainana», hoy izy raha niaro ny heviny.
Hatramin’izao dia mbola tsy mihinan-kena mihitsy na «végétarien» ity andriambavilanitry ny kanto ity, nefa mety hivadika ho «végétalienne» raha mbola mitohy ny famokarana ireo karazana sakafo mbola haniny. «Mihinana trondro, ronono sy vokatra avy amin’ny ronono, ny atody… aho amin’izao fa rehefa tsy misy intsony ny atody avy amin’ny akoho natoraly, ny ronono avy amin’ny omby tsotra… dia tsy hihinana intsony raha tsy ireo vokatra avy amin’ny zava-maniry», hoy ihany izy. Tsy mampaninona ny tsy mihinan-kena satria mba handramo izany ravimbomanga sy ny sôsety atono izany, sakafo tena ankafizin’i Hanitra.
I hanitra sy ny tarehimarika
12 taona i Hanitra no nanomboka nitendry valiha
22 taona no nivezivezeny tany ivelany ka nitetezany firenena maro
90%-n’ny fiainany dia rmozika avokoa
93 ny isan’ireo mpiara-miasa taminy nandritra ny fotoana niasany
1999 no fampisehoana voalohany natrehin’ny ray aman-dreniny, tetsy amin’ny CCAC Analakely
12 ny isan’ny rakikira efa vitany nanomboka ny 1989
Ny 1999 ka hatramin’ny 2001 dia 11 volana ao anatin’ny taona no lany amin’ny fitetezam-paritra ary ny 5 andro ao anatin’ny herinandro no miasa na eny an-tsehatra na any anaty trano fandraisam-peo
12131415161718	Manaraka »
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	RUGBY – «TOP 14»-Hanao valin’ ady amin’ny Cosfa ny 3FB
KITRA – «COSAFA CUP»-Nitohy ny fahafaham-baraka ho an’ny Barea U-20 tany Lesotho
KITRA-ANTSAPAKA «MONDIAL 2014»-Ao anaty vondrona henjana i Ghana sy Cameroun, mitsotsotra ny Frantsay
FIAINANA MPANAKANTO-Tanteraka tamin’ i Parson Jacques ny tonon’ilay hira «Mivoleza»
HOY RY ‘ZALAHY